ထိုင်းနိုင်ငံက ဖိနပ်ကြော်ငြာ တစ်ခုမှာ ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်
ပိုင်တံခွန် ကတော့ လက်ရှိမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီး အောင်မြင်တဲ့ မော်ဒယ်မင်းသား တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည် နေပါတယ်။ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ယောက်ျားပီသပြီး ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်မျိုးကြောင့် အခုဆိုရင် တော့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာတင်မကပဲ အာရှက နိုင်ငံတစ်ချို့မှာပါ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရနေပါပြီ။ အိမ် နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် အရမ်းကို ရေပန်းစားနေပြီး ထိုင်းမှာ Fan Meeting ပွဲ လုပ်တဲ့ ပထမဆုံး မြန်မာ အနုပညာရှင်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံက ကြော်ငြာတွေ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ပေးနေရတဲ့ ပိုင်တံခွန် ကတော့ ဇန်န၀ါရီ (၁၃)ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ အကောင့်မှာ …
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုလက္ခဏာတွေကို ပြနေတဲ့ မှဲ့များ…
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုလက္ခဏာတွေကို ပြနေတဲ့ မှဲ့များ… မှဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသီအိုရီတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ မှဲ့ဟာကံဆိုးခြင်းတွေကိုပဲယူဆောင်လာပေးတယ်လို့ အယူရှိကြသလို ကံကောင်းခြင်းတွေကို သယ်ဆောင်လာပေးတယ်လို့လည်း အယူရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့နောက်မှာ ကျွန်မတို့ဘဝ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုစီရှိရမယ်လို့ လက်ခံထားကြဆဲပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရှေးလေ့လာဖော်ထုတ်ချက်များအရ အောက်ပါဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုလက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်… (1) နှုတ်ခမ်း အပေါ်မှာ မှဲ့ပါတဲ့သူတွေဟာ အထူးကံကောင်းကြသူတွေပါ။အရွယ်မတိုင်ခင်ကတည်းက ငွေကြေး၊အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ထိတွေ့နေရပါပြီ။သူတို့ဟာ သဘာဝ အားဖြင့် တဇွတ်ထိုးဆန်တတ်ပေမယ့် အဲဒီအကျင့်လေးကပဲ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကို အမြန်ဆုံးတွန်းတင်ပေးလိုက်သယောင်ပါ …။ (2) နှာခေါင်းပေါ်(သို့)နှာခေါင်းဘေးဘက်မှာ မှဲ့ပါတဲ့သူတွေကတော့ ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ ကျိန်းသေပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ဓနကတော့ အသက်30(သို့)လက်ထပ်ပြီးနောက်မှ အချိန်တန်မှာပါ။ (3) ညာဘက်ပါးမှာမှဲ့ ပါတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပါပဲ …
အသတ်ခံရသူရဲ့ဝိဉာဉ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံချောက်လန့်မှုကြောင့် (၅)လနီးပါးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မိန်းခလေးရဲ့အလောင်းကို ရှာဖွေတူးဖော်တွေ့ရှိ
အသတ်ခံရသူရဲ့ဝိဉာဉ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံချောက်လန့်မှုကြောင့် (၅)လနီးပါးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မိန်းခလေးရဲ့အလောင်းကို ရှာဖွေတူးဖော်တွေ့ရှိ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်ကောက်မြို့ ဘန်ခဲမြို့နယ် ၊ ဖက်ကဆဲမ် ၄၇ လမ်းက အိမ်အမှတ် (၅၈) တွင်နေထိုင်သူ ဈေးပိုင်ရှင်ဟောင်းရဲ့ သားဖြစ်သူခြံဝင်းထဲကို အမှတ် (၂၆) အထူးရဲတပ်ဖွဲ့မှအင်အား ၁၄ ဦးဟာ ဝင်ရောက်ဝိုင်းရံပြီး အသက် (၄၁) နှစ်အရွယ် နိုင်အဖိချိုင်း (ခ) အိုက်စ်ကို လူသတ်အလောင်းဖျောက်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ် …။ ဖြစ်ပုံကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လလယ်ကတည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ စကွန်နခွန်ပြည်နယ်က အသက် (၂၂) အရွယ် နောင့်ကစ် ( …
သင်မည်မျှအလုပ်ရှုပ်နေပါစေ…အသက်ရှည်ကျန်းမာလိုလျှင် ဤစာကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။ သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကိုသာက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သကြားကို မထည့်ပါနဲ့။ ပူနေတဲ့သံပယိုရေနွေးဟာ အေးနေတဲ့ သံပယိုရည်ထက်ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ် …။ ကဇွန်းဥအဝါနဲ့ခရမ်းရောင်တို့မှာလည်း ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာကောင်းများ ပါဝင်ပါတယ် …။ (၁) ညနှောင်းပိုင်းအစားအစာစားခြင်းဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ် …။ (၂) တပတ်တွင် ကြက်ဥ ၄ လုံးထက်ပို၍ မစားမိပါစေနဲ့ …။ (၃) ကြက်အဆီဘူးကို စားခြင်းဟာအစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေပါတယ် …။ (၄) အစာစားပြီး အသီးကို မစားပါနှင့်။ အသီးကို အစာမစားမီ စားသုံးပါ …။ (၅) ရာသီလာချိန်တွင် လက်ဖက်ရည်မသောက်ပါနှင့် …။ (၆) ပဲနို့ကို …
လူတစ်ယောက်မှာ ရုပ်ရည်ထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ အရာ(၄)မျိုးအကြောင်း…
လူတစ်ယောက်မှာ ရုပ်ရည်ထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ အရာ(၄)မျိုးအကြောင်း… ရုပ်ချောတဲ့သူတွေအနေနဲ့ လူအများရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို ရတတ်ကြပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဦးစားပေးခံရတာမျိုးတွေလည်း ရုပ်ချောတဲ့သူတွေက အခွင့်အရေး တစ်ခုလို ရတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ချောတာက အားသာချက် တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ချောတာထက် လူတွေက ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်နော်… (၁) စိတ်ထား လူတစ်ယောက်မှာ အရေး အကြီးဆုံးက စိတ်ထားကောင်းဖို့ ပါပဲ။ စိတ်ထားကောင်းတာကလည်း တစ်ခါတစ်လေမှာ အားနည်းချက် ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ တစ်ခြားသူကို မထိခိုက်စေတတ်ပါဘူး။ လူလူချင်း မေတ္တာထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ လောကကြီးထဲမှာ စိတ်ထားလေး လှနေတဲ့သူက အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်ထားတတ်တဲ့အတွက် စိတ်ချမ်းသာနေရမှာပါ။ လူတွေက စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေကို ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့သူထက် ပိုပြီး …
မိန်းကလေးတစ်ယောက် တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာများ…
မိန်းကလေးတစ်ယောက် တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာများ… ကမ္ဘာ့အချစ်တတ်ဆုံးလူသားကို ပြပါဆိုရင် မိန်းကလေးတွေကို ပြရမယ် ထင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဘယ်သူမှ ယှဉ်လို့ မရနိုင်အောင် ချစ်တတ်ကြပါတယ်။ မိခင်မေတ္တာဆိုတာမျိုးက ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ချစ်တတ်တဲ့စိတ် ကြီးမားလွန်းလို့ပါပဲ။ အခုတော့ မိန်းကလေးတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သူကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အခြေအနေလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော် …. (၁) ကြည်နူးတာ တစ်ယောက်ကို ချစ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ ချစ်ဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ အလိုလို ကြည်နူးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အချစ်ကို တွေ့နေပြီဆိုရင် ကြည်နူးနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကို လက်ဝယ်ရရှိတဲ့ ကြည်နူးမှုနဲ့တော့ မတူပါဘူး။ သူတို့ကတော့ နေ့စဉ်ဓူဝအရာတွေ …
အာပုပ်ဆော် နံတာ၊ သွားမှာ ကျောက်တည်တာနဲ့ သွားချိုး(ဂျိုး)တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝသွားတိုက်ဆေး
အာပုပ်ဆော် နံတာ၊ သွားမှာ ကျောက်တည်တာနဲ့ သွားချိုး(ဂျိုး)တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝသွားတိုက်ဆေး သွား နဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာရေးက သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ် …။ စကားပြောဆို ဆက်သွယ်ရမှာ ခံတွင်းနံ့ မဆိုးဖို့လိုသလို အပြုံးချင်းဖလှယ်ရာမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ် …။ ဒီအတွက် ဘယ်လို သွားတိုက်ဆေးတွေ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုရမလဲလို့ တွေးနေပြီလား …? အဲဒီလို ကုန်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သွားတိုက်ဆေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် …။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ … – အုန်းဆီသန့် စားပဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း – မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း …. – …
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါ…
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါ… တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ သိကြားမင်း ဂါထာတော် ” ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု ” ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည် …. ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့ …. သာ = လျင်စွာ …. ကု = ပြေးကုန်သတည်း။ ကု = ငါ့အား မကောင်းသဖြင့် ကြံကုန်သောသူတို့သည် …
လူကြိုက်များတဲ့ အပ်မှိုစားသုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများ
လူကြိုက်များတဲ့ အပ်မှိုစားသုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများ မာလာရှမ်းကောတို့ ဟော့ပေါ့တို့စားရင်အမြဲတမ်းပါတတ်တဲ့ ရှည်ရှည် သွယ်သွယ် ပုံစံနဲ့ ပန်းစည်းလို အစုလိုက် အပ်မှိုလေးတွေကို သတိထားမိကြလားပရိတ်သတ်တို့ရေ …… ရွှေအပ်မှိုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာကော တကမ္ဘာလုံးမှာပါ အစားများတဲ့မှိုတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အပ်မှိုကို ဟင်းရည်လုပ်သောက်တာ၊ ကြော်စားတာ၊ ဝက်သားလိပ်ထဲထည့်ကာ ကင်စားတာ၊ ဆူရှီထမင်းလိပ်ထဲထည့်စားတာ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးလည်းလုပ်စားကြပါတယ် … ။ အပ်မှိုကို အင်္ဂလိပ်လို Golden Needle Mushroom လို့ခေါ်ပြီး ဂျပန်လို Enoki လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရုက္ခဗေဒနာမည်ကတော့ Flammulina velutipes ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့ပင်စည်တွေမှာ သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်သလို စိုက်ပျိုးလို့လည်းရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရလည်းလွယ်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်တဲ့ရွှေအပ်မှိုကတော့ ညိုရွှေရောင် ရှိပါတယ်။ အပ်မှိုမှာ အဓိကပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်များ …
This Month : 46628
This Year : 100711